Fipoahana Nahafaty Olona Dimy Raha Kely Indrindra Tao Ankara, Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2016 4:26 GMT
Ankara. Sary Wikimedia.
Nahafaty olona dimy farafahakeliny ary maro dia maro no naratran'ny baomba nipoaka, izay heverina ho fiara nasesika baomba, nikendrena ireo fiara mitondra miaramila tiorka.
Tonga izao fipoahana izao ao anatin'ny fifanenjanan'ny ady eo amin'ny tafika tiorka sy ny milisin'ny Antokon'ny Mpiasan'i Kiordistan (PKK) ka hitan'ny besinimaro ny fitarihan'ny governemanta midaroka baomba isan'andro ireo faritra be mponina Kiorda any atsinanan'ny firenena.
Nanamafy ny fisian'ny maty sy ny maratra avy amin'ny fipoahana nitranga teo akaikin'ny parlemanta tiorka ny governoran'ny tanàna.
Mbola tsy nanondro izay hotsiniana amin'ity fanafihana ity hatreto ny governemanta.
Torkia: Ankara – Fipoahana avy amin'ny fiarabe mitondra miaramila
Avy aty amin'ny misy ahy aty Kizilay, mahita setroka mitambolina mankany an-danitra aho
Ity no fipoahana lehibe faharoa nitranga tao Ankara, tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena, tao anatin'ny fotoana fohifohy izay.
Tamin'ny Oktobra 2015, mihoatra ny zato no maty tamin'ny fipoahan'ny baomba roa [mg] tamin'ny famorian'olona natao hanoherana ny herisetra misy eo amin'i Torkia sy ny PKK.
Nanisi-kevitra ny governemanta fa ny vondrona mitam-piadiana ISIS izay mifehy faritra midadasika ao Iràka sy Syria no tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana fanaovana vivery ny ainy.
Ankara indray 😞
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia efa tratran'ny fanaovana vivery ny ainy ampifandraisin'ny governemanta ihany koa amin'ny ISIS ny distrika manatantaran'i Sultanahmet ao Istanbul. Olona 12 no maty tamin'izany fanafihana izany.
Amin'izao fipoahana baomba mihamatetika ao Torkia hatramin'ny nanombohan'ny fifanenjanan'i Torkia indray tamin'ny PKK izao sy ny fijabahan'i Ankara tamin'ny ady tao Syria sy Iràka tamin'ny herintaona, dia efa nampiomanina handre vaovao ratsy kokoa ny Tiorka maro ny alin'ny 17 Febroary.
Nomena fanairana hitandrina tsara avokoa ny mpiasan'ny fiarovana rehetra ao Ankara raha nampitandrina amin'ny hisian'ny fipoahana misesisesy ny fitsikilovana, hoy ny tatitry ny fampitam-baovao amin'izao fotoana izao